Madaxwaynaha dawlada xamar oo Mar Labaad Ku Celiyay hadaldii Beer Lawaxwsiga ahaa ee in uu Tixgalinayo rabitaanka Somaliland | Biyoguurenews.com
Home Wararka Madaxwaynaha dawlada xamar oo Mar Labaad Ku Celiyay hadaldii Beer Lawaxwsiga ahaa...
Madaxwaynaha dawlada xamar oo Mar Labaad Ku Celiyay hadaldii Beer Lawaxwsiga ahaa ee in uu Tixgalinayo rabitaanka Somaliland
Madaxweynaha dawlada federaalka ah ee soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa shaaciyey inay u diyaar yihiin soo celinta wada hadalkii ay la lahaayeen somaliland.
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad u jeedinayey dadweynaha muqdisho oo iskugu soo baxay xuska maalintii ay xoriyada ka qaateen gumaystihii Talyaaniga ayaa sheegay in dawladiisu ay diyaar u tahay inay dib u bilawdo wada hadalkii ay la lahaayeen somaliland.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlaya qorshaha uga yaala wada hadalada somaliland ayaa waxa uu yidhi “Soomaaliland waa dad walaalaheen ah, duruufo badan oo na kala qaybiyay ayaan soo marnay. Dowladdan waxa ay diyaar u tahay in ay wada hadalladii soo celiso, si
kasta oo aan kalsooni ku galin karnana aan ku galinno, maxaa yeelay waa walaalaheen, waana gacan iyo garab naga maqan.”Sidoo kale madaxweynaha dawlada federaalka ah ee soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka deegaanka Tuka-raq isaga oo labada dhinac ee dagaalamay ku adkeeyey inaan loo baahnayn colaad iyo dhiig dambe oo data.
Previous articleDEG DEG, Shirkii Buurta gacan Libaax oo Lasoo Gunaanaday iyo Qodabad Kasoo Baxay,
Next articleku xigeenka ergayga xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan somaliland iyo Soomaaliya Peter De Clerk ayaa ka hadlay xaalada ka deegaanka deegaanka Tuka-raq ee gobolka Sool.